Xiriirada - Diiwaangelinta Domain Hosting Web
Adeeg aan qummanayn
guusheenuna waxay ku dhisnayd si joogto ah
hagaajinta awoodda daboolida baahiyahooda.
Waa maxay sababta aad u dooranayso adeegyada microchip.ch?
Badbaadada ugu badan ee macluumaadkaaga, xawli rarida badan ee isticmaalayaasha boggagaaga,
gargaar aan la qiyaasi karin
Farsamayaqaannadayadu waxay ku diyaarsan yihiin Isniinta ilaa Jimcaha 09:00 ilaa 13:00 iyo 14:00 ilaa 19:00
Farsamayaqaanadeena ayaa gacanta ku haya xitaa ka baxsan saacadaha shaqada ee caadiga ah, wakhtiyada jawaab celinta waa ugu badnaan. oo ah 4 saacadood
Waxaan bixinaynay adeegyada daruuraha ilaa 1999kii
Microchip waxa ay siisaa macmiil kasta adeeg ku habboon baahiyahooda dhabta ah, oo ay la socoto xalalka amniga iyo taageerada farsamo ee lagama maarmaanka u ah maaraynta ugu habboon. Bixinta Microchip waxaa loogu talagalay macaamiil shirkadeed heer sare ah kaas oo qanciya baahi kasta xitaa xalalka dibadda laga keenay.
Dhab ahaantii, Microchip wuxuu bixiyaa adeegyo daruuri ah oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha macaamiisha kuwaas oo doortay kaabayaasha dibadda.
XIRFAD IYO WAAYO ARAGNIMO
Waxaan la koray si wadajir ah macaamiishayada, iyo guusha our waxaa lagu dhisay horumarinta joogtada ah ee awoodda si ay u daboolaan baahidooda.
WADATASHI GAAR AH
Macaamiishayadu way ogyihiin inay ku xisaabtami karaan taladayada si ay u aqoonsadaan oo ay u xaliyaan dhibaatooyinka nooc kasta ah.
XAL FUDUD IYO DAREEN AH
Waxaan nahay mid degdeg ah oo wax ku ool ah, waxaan si fudud ula qabsaneynaa baahiyaha gaarka ah ee shirkadda, sidoo kale mahadsanid qalabka kormeerka.
TAAGEERADA FARSAMADA 24h
Waxaan bixinaa taageero farsamo oo shaqsiyeysan iyada oo loo marayo portal-ka firfircoon 24/24, todobada maalmood ee usbuuca.
Waxaan ku dooranay xarumahayada xogta goobo istaraatiiji ah si loo fududeeyo fidinta shirkadaha macaamiisheena ee suuqyada caalamiga ah. Saddex Xarumo Xogeed oo ku yaal Jarmalka, mid Holland ku taal iyo mid Singapore ku taal.
Weydiimaha ganacsiga iyo iibinta ka hor waxaad buuxin kartaa foomka hoose.